Lenovo ga-ebuputa mbipụta Ferrari pụrụ iche nke Z6 Pro | Gam akporosis
Lenovo na-akwadebe mbipụta pụrụ iche nke flagship ya dị ike ugbu a. Nkea amatachaala n'ihi na onye osote onye isi ụlọ ọrụ ahụ, Chang Cheng, kpụrụ anyị na nso nso a site na ikpughe a Z6Pro ọbọp ke-acha uhie uhie, na akara Ferrari na azụ.
Maazị Cheng ekwupụtaghị ọnụahịa ya ma ọ bụ mgbe a ga-ewepụta mbipụta ahụ, mana, n'ihi nhapu ahụ, anyị nwere ike iche na igba egbe adighi anya.
Nke a bụ ihe Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition dị ka ya
Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition n'azụ imewe
Igwe ekwentị na-adị mma mgbe niile ma Lenovo Z6 Pro Ferrari gosipụtara ya. Ngwaọrụ a ga - esonye ndị bu ya ụzọ, ndị Lenovo Z5s na Z5 ProGT, nke e wepụtara n'afọ gara aga ma nwee mbipụta Ferrari. E wezụga ahụ, mbipụta ọsọ ọsọ nke Z6 Pro na-etinyekwa otu usoro foto quad ahụ, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, n'ezie.
Ekwentị ga-abịa otu nkọwapụta nke ime dị ka nke mbụ Lenovo Z6 Pro. Onwe ya, ọ ga - agbakwunye ihuenyo AMOLED nke anụ ọhịa 6.39 nke anụ ọhịa ahụ, nke na - abịa na ọkwa mmiri na - arụpụta FullHD + mkpebi nke 2,340 x 1,080 pikselụ na akụkụ akụkụ nke 19.5: 9.
Ekwentị na-akwado site na chipset Snapdragon 855 y anyị na-atụ anya na mbipụta Ferrari dị na ebe nchekwa kachasị elu, nke bụ 12 GB nke Ram na 512 GB nke nchekwa. Na mgbakwunye, ekwentị na-agba ọsọ na Android 11 Pie nke dabeere na ZUI 9 ma nwee nyocha nyocha akara ngosi.
Z6 Pro na-etu ọnụ Ọnọdụ egwuregwu Ultra n'ihi na accelerated ndịna-emeputa na elu CPU arụmọrụ mgbe na-agba ọsọ elu-arụmọrụ egwuregwu. Ama ama na-egosipụtakwa Coldfront PC-larịị mmiri jụrụ usoro maka ikpo ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition: nke a bụ mbipụta ọpụrụiche pụrụ iche nke mbinye aka mbinye aka